China poly poli isi wingkwa Akwa Eriri 40/2 ụlọ ọrụ na-emepụta | Onye na-akpa ákwà
7 ụbọchị sample iji ụzọ oge:
Nnukwu ikike, Nnukwu ikike
Mba Onye si:
Knitting, ịkpa ákwà, Car Safety echebe
1200 ton / tọn kwa Month poli poli isi wingkwa Akwa Eriri 40/2
1.4175kgs / plastic tube, 16cones / katọn, 22.68kgs / ctn. 1.50kgs / plastic tube, 16cones / ctn, 24.00kgs / ctn 1.00kg / plastic cone, 24cones / ctn, 24.00kgs / ctn Anyị nwekwara ike ịme mkpọ ndị ọzọ dịka ihe ị chọrọ.
Xingang, Dalian, Qingdao, Shanghai na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla nke China
Hebei ekwe ákwà Textile Co., Ltd. bụ a emeputa & trading ụlọ ọrụ nke na-amalite nhazi na ahịa nke akwa ngwaahịa.
Onye bu ya ụzọ bụ Hebei Hengshui Yuanda Group
Site n'ụzọ nkwado dịka ụzọ na nhazi na ihe ndị ọzọ, anyị na-ebupụ n'ọtụtụ mba na mpaghara mba ọzọ, suah dị ka: United Kingdom, Korea, UAE, Vietnam, Brazil, Spain, Malaysia, India, Thailand, Morocco , Bangladesh, Guatemala, Turkey wdg.
Anyị niile na-arapara “ahịa bụ nke mbụ”, rube isi na ahịa na-edebere ndị ahịa; arụmọrụ akụ na ụba dị ka etiti; na-agbanwe usoro azụmaahịa na-aga n'ihu, yana ịgbaso ụzọ nke ahịa ngwaahịa. Anyị na-amalite site na eriri mkpịsị polyester izugbe, jiri nwayọ tinye pp ma ọ bụ pc yar yar, eriri akwa akwa, akwa yarn na akwa, wee nwee nnukwu owuwe ihe ubi. Anyị na-atụ anya ịkwado ndị enyi ụlọ na mba ofesi, wee nweta nkwado maka imepụta ọdịnihu dị ukwuu!
1. Factory price: Anyị na-enye ndị kasị asọmpi price na ngwa ngwa nnyefe.
2. Ahụmịhe bara ọgaranya: Ihe karịrị afọ 25 nke spun polyester ịkpa akwa eri. Anyị nwere ike inye gị ọkachamara, magburu onwe ya ma na-eche echiche ọrụ.
3. Ogo asambodo: A na-enyocha ngwaahịa niile tupu ebuba n'ọdụ ụgbọ mmiri, anyị nwere ike ijide ogo kacha mma.
4. Advanced Equipment: karịa 60 dị akpaka winders, china kasị mma eriri, TFO agbagọkwa iji hụ na ịkwa akwa eri mma.
5. Anyị bụ ndị na-ebu ngwaahịa nke mkpuchi na A&E ma nwee aha ọma. Olileanya na anyị nwere ohere na-akwado gị.
Ndi ana-akpo m
Osote: omenala Natural eriri Eco-Enyi na Enyi Cannabis sativa 100% Hemp embroidery Sports Caps Baseball cap
Polyester Sekwa ​​Akwa Eriri 40/2